» रोज लामालाई मिस नेपालको फाईनलमा पुराउन यसरी गरौँ भोट
१९ बैशाख २०७६, बिहीबार १९:१५
चन्द्र घलान/ मकवानपुर, १९ बैशाख । नेपालमा अहिले सबैको ध्यान खिच्न सफल मिस नेपालको २५ औँ सँस्करणको फाईनल मे ९ तारिखमा गरिँदै छ । मिस नेपालको फाईनल नजिकिएसँगै अहिले मिस नेपालका उत्कृष्ट २५ जना प्रतियोगीहरु विभिन्न विधाका लागि कस्सेर प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । उत्कृष्ट २५ मा परेकाहरु मध्ये एक प्रतियोगी हुन् कन्टेस्टेन्ट नम्बर १२, रोज लामा । काठमाडौँ जोरपाटीकी स्थायी निवासी रोज लामा २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् । क्यालोफोर्नियामा बस्ने नेपालीहरुमाझ भएको मिस नेपाल क्यालेफोर्निया २०१७ की बिजेता समेत बनिसकेकी रोज लामाले ट्यालेन्ट राउण्डमा पेन्टिङ बनाएकी थिईन् । उक्त पेन्टिङ देखि नै उनलाई मिस नेपालको दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । धेरै जसो युट्युबर तथा समाचार पोर्टलहरुले उनलाई मिस नेपाल वर्ल्र्ड तथा मिस इन्टरनेसनलका रुपमा उनलाई दाबी गरेका छन् । उनले कानुनमा पहिलो पटक पिएचडी गरेकी नेपाली महिला, समाजसेवी एवम् प्रोफेसर डाक्टर शान्त थपलियाको तस्बिरलाई क्यानभासमा उतारेकी थिईन् । उनको पेन्टिङ कलाको अहिले सर्वत्र चर्चा समेत भईरहेको छ । त्यस्तै मिस नेपालमा गोल्ड स्टार मिस एथलेट अन्तर्गत भएको सटपुट प्रतियोगितामा रोजले तृतिय स्थान हासिल गरेकी थिईन् । उनी सम्मिलित टिम रेडले ४ सय मिटर रिले दौड जित्नुका साथै बेस्ट टिम समेत बन्न सफल भएको थियो । फुर्सदको समयमा अध्ययन गर्न, लेख्न तथा नयाँ नयाँ खोज गर्न मनपर्ने उनले सफल इन्डष्ट्रीयल डिजाईनर र समाजसेवी बन्ने लक्ष्य राखेकी छिन् । कन्स्ट्रक्टिभ टु डी र थ्री डि डिजाईन ड्रईङ गर्न पनि उनलाई मनपर्छ । इन्टीरियर डिजाईनिङ र स्टुडियो आर्ट विषयमा स्नातक गर्दै गरेकी रोज लाईन्स क्लब इन्टरनेसनल एम्बासेडर अफ गुडविल हुन् भने इओपिएसमा पियर एडभाईजरका रुपमा समेत कार्यरत छिन् । मिस नेपालको फाईनलको दौडान मिस पपुलर च्वाईस जितेमा उनी सिधै फाईनलमा पुग्ने छिन् । यहाँ उनलाई मिस पपलुर च्वाईस बनाउन कसरी भोट गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ । कृपया पुरा भिडियो हेरेर तपाईको विचार लेखिदिनु होला । के रोज लामा मिस नेपाल बन्न सक्छिन् ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला ।
मिस पपलुर च्वाईसमा भोट गर्नका लागि सर्वप्रथम मोबाईलमा बिप म्यासेन्जर डाउनलोड गर्नुपर्छ । त्यसका लागि गुगल प्ले स्टोर वा एप अन्य एपस्टोरहरुबाट बिप म्यासेञ्जर डाउनलोड गर्न सकिन्छ । म्यासेन्जर डाउलोड गरेपछि तपाईले आफ्नो मोबाईल नम्बर हालेर आईडी खोल्नसक्नुहुन्छ । त्यसपश्चात डिस्कभर अप्सनमा गएर मिस नेपालको लिंक खोल्ने र रोज लामाको प्रोफाईलमा भोट गर्ने । यसमा उनको बायोग्राफी समेत दिइएको छ । उनलाई कसरी भोट गर्ने भन्ने बारेमा एक–एक स्टेपहरु यो भिडियोमा हेर्नुहोस्–
बिप म्यासेन्जरमा गरिएको भोटको आधारमा उनी मिस पपलुर च्वाईस २०१९ बन्न सकेमा सिधै फाईनलको यात्रा तय गर्नेछिन् । त्यसैले जतिसक्दो भोट गर्नुहोस् । मिस नेपालको उत्कृष्ट २५ मा भएका अन्य प्रतिस्पर्धीहरुलाई पनि तपाईले यही तरिकाबाट भोट गर्न सक्नुहुनेछ । बिप म्यासेन्जरको डाउनलोड लिंक भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा राखिएको छ ।
त्यस्तै रोजलाई फेस अफ फ्यासिनो लगायतका प्रतियोगितामा पनि तपाईले जिताउन सक्नुहुन्छ । रोजको भोटिङ लिंक भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा पनि राखिएको छ । अथवा फेस अफ फ्यासिनोमा उनलाई जिताउन सर्वप्रथम यामाहा नेपालको फेसबुक पेजमा जानुहोस् । उक्त पेज खुलेपछि फोटोज भन्ने अप्सनमा जानुहोस् । त्यसपछि भोट फर फेस अफ फ्यासिनो मिस नेपाल २०१९ भन्ने एल्बममा जानुहोस् र त्यहाँ २५ जना प्रतिस्पर्धीहरुको फोटो देखिन्छ । त्यसमा तपाईले १२ नम्बरमा रोजको फोटो देख्नुहुनेछ । उक्त फोटो खोलेर लाईक, कमेन्टर र शेयर गर्दा उनलाई भोट गरिएको मानिन्छ । तपाईले गर्नुभएको लाईकको ५ प्वाईन्छ, कमेन्टको ५ र शेयरको १० प्वाईन्टका दरले भोटिङ काउन्ट हुनेछ । यसमा उनलाई जिताउन अहिले नै भोट गर्नुहोस् । भोट गर्नेहरुमध्ये एक जना भाग्यशाली विजेतालाई मिस नेपालको फाईनलमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि पास उपलब्ध समेत गराईनेछ । साथै तपाईले अन्य सहभागीहरुलाई पनि यसरी नै भोट गर्न सक्नुहुनेछ ।
त्यस्तै यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा बर्जर मिस ग्ल्यामरको प्रतियोगिताको लागि समेत फोटो भोटिङ खुला छ । यदि तपाई रोलाई भोट गर्न चाहानुहुन्छ भने उनको भोटिङ लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ । तपाईँले लिंकमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ । अथवा सिधै बर्जर पेन्टस् नेपालको फेसबुक पेजमा गएर फोटोज अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि मिस नेपाल २०१९ बर्जर मिस ग्ल्यामर भन्ने फोल्डरमा जानुहोस् र त्यहाँ रोजको फोटो छानेर तपाईले भोट गर्न सक्नुहुनेछ । उनको फोटोमा आएको लाईक, कमेन्ट र शेयरका साथै अन्य आधारमा उनी मिस ग्ल्यामर २०१९ समेत बन्न सक्छिन् । त्यतिमात्र होईन भोट गर्नेहरुमध्ये छानिएकाले मिस ग्ल्यामर २०१९ की विजेतासँग डिनरको अवसर समेत प्राप्त गर्नेछन् । तपाईले त्यहाँ रहेका अन्य २५ प्रतिस्पर्धीहरुलाई पनि त्यसरी नै भोट गर्न सक्नुहुनेछ ।
मिस नेपालको उत्कृष्ट २५ मा काठमाडौँकी निशा पाठक, पोखराकी एलिशा जोशी, काठमाडौँकी सोफिया भुजेल, रिया बस्नेत,अनुष्का श्रेष्ठ, जेन्नी महर्जन, ललितपुरकी अस्मिता महर्जन, काठमाडौँकी किरण थापा, प्रदिप्ता अधिकारी, ललितपुरकी निकिता कर्मचार्य, काठमाडौँकी रोज लामा,पोखराकी सारा बजिमाया, हात्तिवन ललितपुरकी लक्ष्मी राउत, काठमाडौँकी रक्षा उप्रेती, भक्तपुरकी मीरा कक्षपति, मोरङकी जेनिशा थपलिया, झापाकी पुजा श्रेष्ठ, चितवनकी विपना सुवेदी, ललितपुरकी सुभेच्छा अधिकारी, झापाकी प्रकृति कट्वाल, चितवनकी न्यान्सी बोगटी, भैरहवाकी शिवानी घिमिरे, काठमाडौँकी सान्त्वना मालाकार, प्रथा अधिकारी र भैरहवाकी संस्कृति घिमिरे रहेकी छिन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? के रोज बन्न सक्छिन् यस वर्षको मिस नेपाल ? तपाईको विचार कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । उत्कृष्ट २५ मध्ये तपाईको विचारमा को बन्न सक्छिन् मिस नेपाल २०१९ ? यसको जवाफ पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोलाई लाईक र शेयर गरिदिनुहोला र अन्य भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला ।